Iseti yebrashi yokubeka ababoneleli kunye nefektri - China Makeup Brush Set Abavelisi
Ihowuliseyili 12PCS Rose Gold NK3 Makeup Brushes Seta ubuso Makeup Eyeshadow Eyeliner Lip Brush Set Isixhobo Nge Metal Box
Amagqabantshintshi ngeenkcukacha ezikhawulezayo zeBhulashi: Izinto ezenziwe ngeFibre Indawo yoQalo: Zhejiang China Inombolo yeModeli: I-BRS012NK SEBENZISA: Ubuso busetyenziswa kunye: neLip Liner, CONCEALER, Shaving Brush, BLUSHER, FOUNDATION, Eye Shadow Items Per Set: 12PCS / Set Handle Material: Eco- Ukupeyinta ngobuhlobo Wood Ezinye izinto zingenziwa ngokwezifiso zeemfuno zabathengi Uhlobo: I-Angular Blush ...
I-2019 MURAN New Deisgn yokuThengisa okuTshisayo okuThengisayo kweBhulashi, i-PC ezili-13 zeBrushes Blusher Face Powder Iinwele ezithambileyo zeBrashi Izixhobo zeBlue Makeup Brush Kit
Yenzelwe ukusetyenziswa ekhaya kunye nobungcali! Iseti yebrashi iza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobungakanani ukugubungela kufuneka wenze imimandla kwiindawo ezahlukeneyo zobuso kwaye ilingana nayo yonke imilo yobuso. Iibrashi zamehlo ezenziwe ngezinto zokwenziwa zepremiyamu zokwenziwa ngesiphatho somthi zibonelela ngokungachukumiseki kunye neemvakalelo. Le seti yebrashi yamehlo ilungele ulwelo, umgubo, okanye iikhrimu ukuvelisa iliso elihle kunye nobuso bokwenza isicelo. Ukugubungela bonke ubungakanani kunye nokumila kweebrashi ukwenza iintlobo ...
Iibhulashi eziMuran eziphezulu ze-10pcs ezikumgangatho ophezulu ezijikelezayo zokubamba i-unicorn uthotho lwebrashi esetiweyo enemibala ye-Spiral Unicorn Makeup Brush Set
Ukuqokelelwa kobungcali Iibrashi zokuhombisa zilungile ekusebenziseni ulwelo, umgubo okanye iimveliso zeoyile zokuthambisa, ezikwenza ukuba ubonakale umangalisa kuwo wonke umzuzu ngaphandle kwemveliso yenkunkuma kunye nokuphalazwa kwebrashi. Ukuthembeka kunye nokuhlala ixesha elide Super kunye ne-premium-quality bristles zi-ultra-soft, zilungele kwaye zikhusela ulusu lwakho. Ngapha koko, ibrashi inika ukugqibezela okungenasiphako nokungagungqi ngalo lonke ixesha, ehambisa ukusebenza okuhlala ixesha elide. Izinto zokuqinisekisa kwakhona iinwele ze-Ultra ezithambileyo, ezixineneyo kunye nezigudileyo: iipesenti ezingama-100 zenkohlakalo. ...
I-12Pcs yokuHamba ngokuHamba ngesiphatho somthi I-Rose Pink Blush Powder Yenza iibhulashi ze-Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set
Igama leMveliso 12Pcs Portable Travel Wooden handle Rose Pink Blush Powder Make Up Brushes Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set Set Material Synthetic hair + Wooden handle + aluminium ferrule Item no.: Brs0PK012WD Umbala oCwangcisiweyo Ubungakanani 24 * 12 * 2cm Ubunzima 195g Logo ibhegi ye-pu, kunye ne-200sets kwibhokisi yeSampula yexesha le-5-7, iimfuno zokwenza ngokwezifiso ze-15-20kwiintsuku zeMveliso zixhomekeke kubungakanani bakho, ngaphantsi kwee-2000s zifuna i-15-20days, ngaphezulu kwee-2000sets ...
I-2019 High Quality 14pcs I-Wood Cosmetic Brush I-Makeup Brush I-Brush ye-Makeup ye-Label yangasese
●UKUQOKELELWA KWENKQUBO YE-14-PIECE: Gubungela zonke iimfuno zakho zobuso bakho. Sebenzisa i-BS-MALL yokuxuba ibrashi, ibrashi yamashiya, iibrashi zamehlo kunye nokunye kunokukunika iziphumo ezifanayo nezenziweyo ezenziwe ligcisa lobugcisa!
● FIT BONKE UBUSO: Iibrashi zamehlo zivela kwiimo ezahlukeneyo kunye nobukhulu kungoko zilungele ukuhonjiswa kunye nokuqaqanjiswa kobuso bonke.
● I-Vegan kunye ne-Cruelty-Free Bristles: Iibristles zenziwe kakuhle ngenayiloni eyomeleleyo yokwenziwa kwefayibha kunye nesilky, eqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide. Zonke iibrashi zokuhombisa zilungile kwaye zixinene, zilungele nolusu olubuthathaka. Ngamandla amakhulu okubamba ipowder, iibrashi ziya kuba ngumncedi olungileyo wokwenza ukubukeka okungenasiphako.
Izixhobo zeVenkile zeVenkile ezi-7 ze-PCs ezikhawulezayo kunye neeSeti zeBrashi ngeSeti ye-Sequin yokwenza i-Brush
[I-SOFT DENSE BRISTLES]: iibrashi zokuhombisa zenziwe ngemicu yokwenziwa ekumgangatho ophezulu, ikunika ukuthamba kunye nokuthamba imvakalelo yokuthinta, akukho lusu lonzakalisayo, ilulungele nolusu lolona lubuthathaka kwaye ilulungele naluphi na uhlobo lwesiselo esingamanzi okanye sekhrim.
[AKUKHO UKUTSHINTSHA]: Yenziwe nge-alloy yokusebenza ephezulu, izinto zeplastiki kunye nokuxinana okwenziweyo, akukho ukuphalaza kubuso bakho ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo.
[IIBRASI EZINKULU ZOBUGCISA]: Ngezi zinto zininzi zisetyenziswayo Isiseko sePowder Abaculi beeMveliso zeMithunzi yeeBrashi zeSeti, sebenzisa ngokungenamsebenzi kwaye udibanise umgubo, i-highlighter, i-concealer, isithunzi, i-liner, kunye nokunye. Inomdla wokuqamba kunye nabathandi.
I-rose yegolide ye-Glitter Handle 10pcs i-crystal diamond diamond brush iseti kunye ne-PU bag makeup brush
Iseti yebrashi iza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobungakanani ukugubungela kufuneka wenze imimandla kwiindawo ezahlukeneyo zobuso kwaye ilingana nayo yonke imilo yobuso.
Iibrashi zamehlo ezenziwe ngezinto zokwenziwa zepremiyamu zokwenziwa ngesiphatho somthi zibonelela ngokungachukumiseki kunye neemvakalelo.
Le seti yebrashi yamehlo ilungele ulwelo, umgubo, okanye iikhrimu ukuvelisa iliso elihle kunye nobuso bokwenza isicelo.
Ukugubungela bonke ubungakanani kunye nokumila kweebrashi ukwenza iintlobo zobuso bobuso, iseti yebrashi eyahlukileyo inokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho, ubonise ubuhle bakho bendalo kwaye ushiye ubume obungenasiphako.
Izibambo zebrashi zokuhombisa zenziwe nge-alloy ephezulu kunye nezinto ezenziwe ngomthi. Kulula ukumbamba kwaye bomelele ixesha elide usebenzisa.
Iibristles zokwenza ibrashi yekiti zenziwe kakuhle nge-fiber eyomeleleyo eyomeleleyo- inyiloni ethambileyo kunye nesilika. Akukho nkohlakalo kunye nolusu-inkcazo yemveliso